National Power News:: निर्मलालाई एक नारीको खुला पत्र : ‘नारी समाज फुटाउनेले समाज कसरी जोड्न सक्छ ? National Power News:: निर्मलालाई एक नारीको खुला पत्र : ‘नारी समाज फुटाउनेले समाज कसरी जोड्न सक्छ ?
• ‘अनलाइन एक्टिङ कम्पिटिसन’ को विजेता बने मनिष पाण्डे • रोमन परियार र रिया नापितलाई ‘मिस्टर एण्ड मिस ग्ल्यामर’को ताज • गायक सुनिल थापा मगरको मर्मस्पर्शी गीत 'निर हो' सार्वजनिक • ‘मिस्टर एण्ड मिस टिन ग्ल्याम नेपाल २०२१’ को उपाधी सुमन तामाङ र निर्जला रजकले जिते • चिज कुमार श्रेष्ठको अभिनयमा जे बि बिष्टको सन्देशमुलक गीत सार्वजनिक
Saturday, July 31, 2021 National Power
निर्मला जी नमस्कार । गैर आवासिय नेपाली संघ पोर्तुगलको महिला उपाध्यक्षमा उमेद्वारी दिएको कुरा ढिलागरी चाल पाएँ । तपाईका फेसबुक र निर्बाचनका प्रचार सामाग्री हेर्दा एकातिर हाँसो उठ्यो भने अर्कोतिर दुःख पनि लाग्यो । तपाइका हरेक प्रचार सामाग्रीमा स्वच्छ समाज निर्माण र समाजलाई जुटाउने भन्ने थियो । अरु पनि धेरै काम गर्छु भन्नुभएको रहेछ । हिजो नेपाली नारी समाज फुटाएर जाने तपाई नै होइन ? तर अहिले आएर समाज मिलाउने कुरा गर्दै आउनुभएको छ । भइरहेको संस्थालाई पद लोभका कारण फुटाएर अर्को संस्था खोल्नुभो, त्यसमा आफैं हालीमुहाली गर्नुभो । जुन कुरा समाजले प्रष्ट तरिकाले बुझेको छ । तपाईको मुल्यांकन गरेको छ ।
नारी समाजको दोश्रो अधिबेशन २०१९र२१ लाई अन्तराष्ट्रिय नारी दिवसको अवसर पारेर भब्य गरी मनाउने योजना हामी दिदी बहिनीबीच भएको थियो । भनेजस्तो पद नभएपछि बैठकदेखि अधिवेशन सबै बहिष्कार गरेको प्रमाण हामीसँग छ । त्यसको साक्षी समाज छ । हामीले स्वच्छ समाज निर्माणका लागि २०१४ जुन २३ मा संस्था गठन गरेका थियौं । तर तपाई अहिले ७ बर्षपछि बल्ल स्वच्छ समाज निर्माण गर्न भनेर एनआरएनमा जान लाग्नुभएको छ । तपाई आफैं मनन गर्नुस की नारी समाज फुटाएर आज तपाई पहिलाकै स्थितीमा आइपुग्नुभएको छ । त्यो नेपाली समाज बिग्रिएको तपाईहरु जस्ता दुई चार जना महिला र तपाईहरुलाई साथ दिने केही पुरुषहरु रहेका छन ।
बिभिन्न माध्यमबाट पोर्तुगल आयका दिदिबहिनिहरुको दुखसुख, अनुभव शेयर गरि बिदेशिभुमिको बसाइ सहज बनाउन महिलाहरुको सङगठनको आबश्यकता महशुस गरि संस्था जन्माइएको थियो । जहाँ तपाइले कसैको लहडका भरमा समाज फुटाउनुभयो । यो घटनालाई जति व्याख्या गरेपनि सकिदैन । तपाईले समाज त भाँड्नुभो आफु नजिककालाई पनि बोकेर महिला समाज गठन गर्नुभो । आफैं अध्यक्ष भएर काम गर्दा पक्कै पनि थाहा पाउनुभयो होला काम गर्दा कति असहज परिस्थितको सामना गर्नुप¥यो भनेर । तपाईकै कार्यकालमा पाँच जना पदाधिकारीले राजीनामा दिएर महिला समाज र तपाईको साथ छाडेको घटना पनि त ताजै छ । तपाईले मनपरी नगरेको भए उनिहरुको राजिनामा कसरी आउँथ्यो त ?
बिदेशि भुमिमा स्थापना गरिएको समाजलाइ निरन्तरता दिनु त कता हो कता आफ्नो पद र जिम्मेवारीको ख्याल नगरि गुट उपगुट बनाएर हिंडेको व्यक्तिले एनआरएनमा महिला उपाध्यक्षको काम कसरी गर्ला रु तपाईंका कृयाकलापले हामी दिदिबहिनिको आत्मसम्मानमा ठुलो चोट पुगेको छ । तपाइले दिनुभएको उम्मेदवारी र प्रतिबद्धता ले त्यो नमिठो समय को सम्झना गराइ दियो । अन्तमा खुला पत्रसँगै पोर्तुगलमा रहेका दिदी बहिनी दाजुभाइहरुलाई समाज फुटाउने मनशाय बोकेकाहरु सँग टाढैं बस्नु उचित हुन्छ भन्न चाहन्छु ।
खोक्रो चुनावी नाराले समाजको हित हुँदैन त्यसैले आफ्नो मतको अधिकारलाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्न अनुरोध गर्दछु । जसले महिलाको हक अधिकारका साथै दुखसुखमा साथ दिएको छ उसलाई मात्रै मत हाल्न आग्रह गर्दछु ।
काठमाण्डौ– पिम नेपाल चलचित्र महोत्सव २०२१ को लागि आवेदन खुल्ला गरिएको छ । यहि...
काठमाडौँ — आश्विन ५, २०७८। ग्रेट भिजन मिडियाको आयोजनामा संचालित ‘अनलाइन एक्टिङ कम्पिटिसन’ को...
रोमन परियार र रिया नापितलाई ‘मिस्टर एण्ड मिस ग्ल्यामर’को ताज
काठमाडौँ — आश्विन ५, २०७८। डेस्टिनी ईभेन्ट मेनेजमेन्टद्वारा आयोजित सौन्दर्य प्रतियोगिता ‘मिस्टर एण्ड मिस...
काठमाण्डौ- सुनिल थापा मगरले ल्याए मर्मस्पर्शी गीत ‘निर हो’ भ्वाइस अफ नेपालका सुनिल थापा...
‘मिस्टर एण्ड मिस टिन ग्ल्याम नेपाल २०२१’ को उपाधी सुमन तामाङ र निर्जला रजकले जिते
काठमाडौँ — आश्विन ५, २०७८। एआर ईन्टरटेनमेन्टको प्रस्तुती तथा राईजिङ कृयसनसंगको सहकार्यमा पि प्रोडक्सनलेआयोजना...
काठमाण्डौ- परदेशमा गएका छोराछोरीले आमाबाबु र देशलाई नभुलुन भन्ने सन्देश सहितको “सबै कुरा भुल...